XZ3600 I-HDD idityanisiwe nge uyilo oluzenzekelayo kwaye inokuxhotyiswa ngokuzithandela ngegumbi lokusebenza elizimeleyo. Iyamkela ulawulo olonga phambili lokugcina amandla kunye neetekhnoloji zobunini ezifana nokuvalwa amandla-ukugcina iluphu, ulawulo olulinganayo lombane-hydraulic kunye umthwalo-sensinjan ulawulo. Tiiparameter eziphambili zomsebenzi kunye nolawulo lwetekhnolojinditsho have ifikelele kwinqanaba lehlabathi eliphambili. Izinto eziphambili zenkqubo ye-hydraulic, inkqubo yokuhambisa, isinciphisi kunye nenkqubo yolawulo yombane are yonke ye ngamazwe iklasi yokuqala uphawus nge umgangatho onokuthenjwa.
Iimpawu Ukungeniswa kweXZ3600 HDD
Isixhobo sedijithali sibonisa ngokuzenzekelayo iiparameter zokwakha eziphambili ezinje nge-torque yokwenyani kunye namandla okutsala ngexesha lokwakha, kwaye ukusebenza kulula. Itekhnoloji yokuziva ngobuchwephesha ithambile, enokuthi ibonise kwangoko ukulayisha ngokukhawuleza, ikhusele ngokuthembekileyo umatshini.
2.Ukutyibilika kwesakhelo sokubhola sixhomekeke kuxinzelelo lokutsalwa ngesilinda. Ukudityaniswa nobume bengalo yerocket ngaphambili, uhlengahlengiso lweengile ezingena ngokulula kulula, kulula kwaye kukhuselekile. Umda ongemva kwesakhelo sokugrumba usebenzisa umda kathathu wokungqubana ngaphandle kokuqinisekisa ukhuseleko.
Inkqubo yamandla ombini yamkelwe, apho injini inokuwugqiba wonke umsebenzi; kudityaniswe netekhnoloji yokulawula isantya sokuhambisa phantsi kweemeko zokusebenza ezininzi kunye netekhnoloji yokulawula izixhobo ezininzi zokujikeleza kunye nokutsala-ukutsala, umatshini unoluhlu olubanzi lwesicelo. Kwimeko yokwakhiwa kwepore enobubanzi obuncinci, inokusebenza ngenjini enye kuphela, ethoba ukusetyenziswa kwepetroli kunye neendleko zokwakha.
I-4 .Flat flip nge-screw enkulu ye-torque yamkelwe ngexesha lokwakha, ekulungele ukwakhiwa kwesitishi. Isihlalo somhlathi esijikeleze ubumbano esiqinisekisiweyo siyakuqonda ukugxila okuzenzekelayo kombhobho wokugrumba kwaye kwenza ukubotshwa kuthembeke.
5.Umatshini wamkela ubuchwepheshe obuninzi bokukhusela. I-torque yokujikeleza, amandla okutsala kunye nokuqinisa amandla okunyanzela konke kulungelelaniswa kunye netekhnoloji yolawulo loxinzelelo lwedijithali yamkelwe. Uhlengahlengiso kulula kwaye kulula, kwaye unokusetwa ngokuchanekileyo.
Inkqubo ye-hydraulic evaliweyo yamkelwe ukujikeleza kunye neetekhnoloji zolawulo oluphambili ezinje ngolawulo olunovakalelo lwamkelwa ukuba zityhale. Izinto eziphambili zokwenza ngesanti kubunzulu baphantsi, inkqubo yombane kunye nokuhambisa ziimveliso ezidumileyo zehlabathi ezikumgangatho onokuthenjwa.
Dudula-Tsala impompo Sauer
Rotary mimbumba Rexroti
Ukunciphisa iRotary IBrevini / iBonfiglioli
Dudula-Tsala mimbumba Rexroti
Dudula-Tsala ukunciphisa IBrevini / iBonfiglioli
Ukunciphisa isinciphisi Rexroti
Ukhwelile cindlela XCMG
Uluhlu lokupakisha lunikezelwa nge-XZ3600 HDD, ebandakanya amaxwebhu ezobuchwephesha:
Isatifikethi seMveliso / iMiyalelo yokuSebenza kweMveliso / ukuSebenza kweNjini
Isixhobo sokupholisa umoya ngokubanzi sokuSebenza koThutho lweZithuthi (Standard cab)
Umsebenzi kunye noLondolozo lweNcwadi ekwi-Crane ebhodini
Umsebenzi kunye noLondolozo lweNcwadi yempompo yodaka (Ukuba kukhethwe impompo yodaka)
Uluhlu lokuPakisha (kubandakanya uLuhlu lweeNxalenye zokuNxiba kunye neeNxalenye ezingasebenziyo kunye noLuhlu lwezixhobo eziqhotyoshelweyo)
Egqithileyo XZ2200 oxwesileyo zemiyalelo zokomba rig
Okulandelayo: I-XZ6600 ethe tyaba yomkhombe wokugrumba isixhobo
Horizontal Directional Ukubhola Rig, I-hdd rig, umatshini wokugrumba i-hdd, Umatshini wokugrumba amaqula,